SHCHITOVKA ON DHIRTA INDOOR: SAWIR; SIDEE LOOLA DAGAALLAMAYAA OO UGA SAARI KARAA UBAXYADA HABABKA KIIMIKADA, IYO SIDOO KALE SIDII LOOGA TAKHALUSI LAHAA GURIGA IYAGOO ISTICMAALAYA TALLAABOOYIN DHAQAMEED? - SOOSAARKA DALAGGA
Talooyin ku saabsan sida loola dhaqmo gaashaanka dhirta gudaha; sawir cayayaanka
Diido indhaha aqalka, taas oo ah ubaxyo badan oo la dhejiyey. Laakiin daryeellayaashu waxay u muuqdaan kuwo aad u fudud. Haddii aad dhirta ku daaweyso adoon fiiro gaar ah leh, way dhiman karaan.
Xaqiiqdii, ma aha oo kaliya waraabinta iyo iftiinka qoraxda u baahan yahay dhirta gudaha. Waxay u baahan yihiin daryeel maalin kasta, fiiro gaar ah iyo xitaa hadalka aadanaha. Haddii aad ka saartid waxaas oo dhan, waxay bilaabi doonaan inay niyad-jebiyaan, oo ay qoyaan, waxay ku degi karaan cayayaanka. Maqaalkani wuxuu ka hadli doonaa gaashaanka, muujiyaan sawirrada cayayaanka kuwan oo sharax tallaabooyinka looga hortagayo.
Waa maxay cayayaanka noocan ah?
Mid ka mid ah cadaawayaasha ugu xun ee dhirta gudaha ah waa gaashaan. Waxay gabi ahaanba burburin kartaa dhirtii dhirta ee guriga ku jiray toddobaadyo. Iyo xitaa ubaxyo nus ah oo aan sumad u lahayn ma tagto.
Dhanka kale, shchitovka u egtahay tubercles in ficil ahaan dhaqdhaqaaqa ah ee afkoda iyo caleemaha. Cabbirka cayayaankaasi kama badna 5 mm. Dumarku waa kuwo aan firfircoonayn, oo ay ku jiraan qolofka cufan ee dirxiga. Laakiin dhallinyarada shchitovki iyo shakhsiyaadka ragga labka ah ayaa si sahlan u dhaqaajiya caws iyo caleemaha geedka. Sidaa daraadeed waxay u duulaan oo ku socdaan dhirta deriska ah.
Sidaa darteed, markii uu helay cayayaan ah hal qol oo ubax ah, waxaa suurtagal ah in la kulmo dadka kale. Cayayaankaasi waxay ku dhufanayaan iyagoo dhigaya ukumaha dhabarka caleen ama dhirta dhirta. Ku dhajinta waa microscopic si ay u badan tahay in aan la ogaan karin.
Waxay ku quudiyaan dheecaan tayroodh ah dhirta, kuwaas oo ay ka nuugaan asliga ah iyo xaashiyo. Marka hore, caleemaha yar yar iyo suunka ayaa hoos u dhaca weerarkooda, ka dibna waxay u guurtaa qaybo horeba u samaysnaa dhirta.
Waa muhiim! Weerarka weyn ee cayayaanka ayaa burburiya warshad qaangaar ah dhowr wiig, oo ka dambeeya oo kaliya xididka iyo jiritaanka qallalan. Ka dib markii shchitovka cunay kala bar caleemaha, waa ku dhowaad aan suurtagal ahayn in la badbaadiyo warshadda.
Waxay sidoo kale noqon doontaa mid waxtar leh in la ogaado noocyadda gaashaanku yahay. Waxaad ka akhrisan kartaa halkan.
Sababaha ay u muuqdaan ubaxyo
Warshad kasta waxay leedahay difaaciisa. Haddii ay daciif tahay, markaa ubaxa waxaa laga yaabaa in lagu weeraro cuduro kala duwan iyo cayayaanka, oo ay ka mid yihiin xayawaanka. Sidoo kale ku dhirbaaxaa dhirta leh nukro-sarre sare iyo dheef-shiid kiimikaad hooseeya. Ku xadgudubyadani waxay u dhacaan sababtoo ah waraabka aan fiicnayn, iftiinka, hawada qallalan.
Inta badan tani waxay dhacdaa xilliga qaboobaha, marka maalinta ay gaabantahay oo hawadu qallalan tahay. Waxay ku jirtaa xaaladahan oo kale in gaashaanka gumaadka uu jecelyahay inuu ku noolaado. Caabuqa wuxuu dhacaa inta badan laamaha cusub ee la soo bandhigay, iyo ukunta cayayaanka ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi karaa ciidda iyo xitaa biyo.
Marka xigta waxaad arki kartaa sida gaashaanku u eg yahay:
Tallaabooyinka ugu horreeya ee lagu ogaanayo
Haddii aad ogtahay in geedka uu bilaabay inuu qalo oo uu engego, ka dibna uu helay buustaan ​​mugdi ah ee caleemaha, ka dibna waxaa lagama maarmaan ah in lagu go'aamiyo sida ubax sida qol kale oo aan lahayn dhirta oo dhan. Ka dib markii go'doominta kaddib, waxaad bilaabi kartaa in aad dhirta ka badbaadiso dulinkaas.
Xiisado iyo qarsoodi
Inta lagu jiro daaweynta ubaxyada ay dhibaatadu saameysey, waxaad la socon kartaa hababka dadweynaha iyo cayayaan-dilaha. Markaad samaysay doorashadii labaad, waa lagama maarmaan in la tixgeliyo in wakiillada noocaas ahi ay keeni karaan xasaasiyado iyo sumowga carruurta yaryar, waayeelka, xasaasiyadda iyo xayawaanka rabaayadda ah.
Qoraalka. Dhibaatooyinka dadwaynaha ma aha kuwo wax ku ool ah oo ku saabsan taraqyada, isla markaana, ma saameyn xun ku yeelan doonaan dadka iyo xayawaanka ku nool guriga. Sidaa daraadeed, inta badan waxay la xiriiraan daaweynta dhirta indoor leh ee hababka daawada dhaqameed.
Sidee looga takhalusi karaa isticmaalka daaweynta dadweynaha?
Habka ugu caansan ee loo dilo cayayaanku wuxuu ka tirtirayaa warshad leh saabuun, biyo, iyo aalkolo.
Si tan loo sameeyo, 20 garaam oo saabuunta dareeraha ah ayaa lagu kala diraa litir biyo ah, ka dibna ku dar 10 ml oo khamri ah.
Iska tiri caleemaha iyo asliga ah waa lagama maarmaan si loo dhamaystiro burburinta dulinka.
Waxaad isticmaali kartaa buraashka ama suufka, ka dib marka la dhoofiyo waa in la geeyaa.
Thyroids uma dulqaadan karto isku dhafka khamriga iyo saabuunta, sidaa darteed waxay u dhintaan dhowr saacadood ka dib daaweyn. Laakiin, nasiib daro, ma aha oo kaliya cayayaanka aan u dulqaadan karin saabuun, laakiin sidoo kale dhirta qaarkood. Ka hor inta aanad isticmaalin habkan, fiiri jawaabta dhirta, taasoo keenaysa halabuurka kaliya ee hal xaashid.
Qorshaha basbaasku waa mid khatar yar, isla mar ahaantaana maaha mid ka gaabsan saameeynta saabuun-alkolada waxtarka.
Si aad u diyaariso waxaad u baahan tahay inaad qaadato:
100 garaam oo ah basbaas kulul, fal waxashnimo leh.
Ka dibna ku shub massalka soo go'ay laba litir oo biyo ah iyo meel qabow ku ridaan maalin.
Next, ku rusheeyo dhirta laga bilaabo buufin leh xal sifeeyeen oo ah basbaas kulul.
Hawlaha biyaha ee noocan ah waa in la sameeyaa laba jeer toddobaadkii dhowr bilood.
Si la mid ah basbaas, waad karin kartaa ama toon kartaa basal fiiqan. Saameynta faleebooyinka noocan ah ma aha mid u dhow sida wanaagsan ee basbaas.
Marka haweenka qaangaarka ah ee qaangaarka ah ay si adag ugu fariistaan ​​geedka, oo aan laga saari karin, waxaad ku dili kartaa gaasta. Ka dib marka caleemaha iyo stem dhamaantood la shidaa, kerosene si fudud ayaa loo kala saari doonaa.
Tani cayayaanku ma jecla dhadhanka vodka aad u badan, sidaa daraadeed waxaa suurtagal ah in la saliido dhammaan qaybaha geedka, sidaas darteed waa in dhirta la gooyo.
Kala saar laba qaado oo saliid saytuun ah hal litir oo biyo diirran ahna tirtir caleemaha. Halabuurka saliidda saytuunka waxaa lagu dabaqaa geedka toddobaadkii hal mar.
Sidee looga jari karaa kiimikada?
Kiimikooyinka la dagaallanka gaashaanku waa saddex nooc:
La xiriir Waxay gashaa iyada oo loo marayo maqaarka iyo cayayaanka. Waxaa loo isticmaalaa marxaladda hore ee cudurka.
Xiidmaha. Taas oo keenta waxyeello halis ah marka la galo afka cayayaanka.
Nidaamka. Kooxdani waxay sunta ku dhalataa iyada oo loo marayo shubka suntan ee geedka. Dareemayaasha, cunista cabitaanka sunta, isla markiiba way dhimataa.
Dareen u yeelo! Ha ku tagin dhirta qorraxda si toos ah u shaqeynaya by kiimikada.
Waxyaabaha kiimikada ah waa in lagu iibsadaa dukaamo khaas ah oo lagu daryeelo dhirta gudaha. Daawooyinka ugu caamsan ee la dagaallanka gaashaanku waa:
Qalabkan waxaa loo isticmaalaa labadaba dhir daawada iyo waraabinta isku dhafka dhulka. Waxa uu naftiisa u taagay sidii qalab xoog leh ee dagaalka ka dhanka ah gaashaan. Sidee loo burburiyaa cayayaanka daroogadaas? Xalka waxaa loo diyaariyey sida saamiga sida - 2 ml of Aktellik halkii litir oo biyo ah. Walaaq oo isla markiiba daaweyn geedka.
Laga soo bilaabo sifaha wanaagsan waxaa la ogaan karaa in daroogada lagu dari karo habab kale oo kiimikada ah, awood u lahaanshaha habka beerto. Noocyada xun ee daroogada waxaa ka mid ah sunta sare iyo urta aan fiicnayn.
Daroogo nidaam leh oo leh nooc ballaaran oo firfircoon, waxay wax ku ool u tahay cayayaanka badan. Isticmaal qalabka waraabka iyo waraabinta subagga. Si loola dagaalamo qolka fadhiga, qoyan 1 ml oo ah Aktar 1 litir oo biyo ah. Dhimashada mass ee cayayaanka waxay dhacdaa 24 saacadood ka dib daaweyn.
Tani waa daroogada ugu fiican ee la dagaallanka gabbaadka, kaas oo deggaan xaafadaha. Qalabka waxaa loola jeedaa habka xiriirinta. Waxaa lagu gartaa sunta yar iyo ur la'aanta. Schitovka wuxuu bilaabmayaa inuu dhinto tallaabada daroogada kadib laba - saddex cisho. Xalka daaweynta: 0.5 garaam oo bangiga ah ayaa lagu kala diraa litir biyo ah.
Badeecadu waxay ku saleysantahay qaybaha bayoolojiga, sidaa daraadeed ma aha khatar ah xayawaanka iyo dadka. Saameyn xun oo ku saabsan dhowr cayayaanka dhirta gudaha. Halabuurka loogu talagalay buufinta waxaa laga diyaariyey 2 ml Fitoverma iyo 0.5 litir oo biyo ah.
Waa muhiim! Markaad la shaqeyneyso walxaha kiimikaad, isticmaal qalabka ilaaliya, fiirso qiyaasta loo baahan yahay, si taxaddar leh u akhri tilmaamaha daawooyinka. Waa lagama maarmaan in la helo carruurta iyo xayawaanka rabaayada guriga waqtiga daaweynta.
Waxaad baran kartaa wax badan oo ku saabsan sida loo xakameeyo gaashaanka diyaar garow diyaar ah iyo daaweynta dadka ee qodobkan.
Ka hortagga marwalba way ka fudud tahay daaweynta. Sidaas darteed ma jirto baahi loo qabo in lagu garto macdanta cayayaanka, daryeelka waa in la geeyaa dhirta guriga. Si joogto ah u baaro, kormeer xaaladda iyo midabka caleemaha, sameyso waraabinta, sida waafaqsan shuruudaha, si aad hawo u hesho aqalka dhirta lagu koriyo. Gabbaadku marnaba ma muuqan doono halka ay jirto iftiin wanaagsan, qoyaan badan iyo dhirta caafimaadka leh.
Shchitovka waa cayayaan khatar ah, laakiin waa la dagaallami karaa. Sababtaas waxaad u baahan tahay oo kaliya rabitaanka inaad ku aragto dhirta gurigaaga xaalad aad u fiican.